Hayadaha Samafalka oo dib uga howl bilaabay Xeryaha Qaxootiga Kenya Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Hayadaha Samafalka oo dib uga howl bilaabay Xeryaha Qaxootiga Kenya Qaar ka mid ah Hayadaha samafalka ayaa waxa ay dib uga howl bilaabeen Xeryaha Qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya.
Sida ay sheegayaan wararka Warlalis uu ka helayo dalka Kenya Hayadaha samafalka ayaa waxa ay dib uga bilaabeen xeryaha Qaxootiga Kenya quudinta ay u sameen jireen dadka Qaxootiga ah kadib markii markii hore ay u joojiyeen falal amni daro.
Waxaa la arkayay iyadoo maanta ay furan yihiin xafiisyada Hayadaha ay lahaan jireen Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab oo ay ka mid tahay Xerada Dhagaxleey iyo sidoo kale dadka Qaxootiga ah ee Soomaalida oo ku jira safaf dhaadheer islamarkaana raashinka loo qeybiyo qaadanayay.
Gudoomiyaha Xerada Dhagaxleey oo arintaani u xaqiijiyay Idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu soo dhaweeyay dib u bilaabashada samafalkii loo sameyn jiray dadka Soomaalida ah, isaga oo xusay in arintaani ay ka dambeysay soo badbaadinta shaqaalihii ajanabiga taasi oo keentay in Hayadaha ay mar kale ku dhiiradaan in ay dib u howlgalaan.
Waxii ka dambeeyay markii Kenya ay soo gashay Soomaaliya oo Kenya ay ka bilowdeen falal amni daro ayaa waxaa meesha ka baxay Hayadihii samafalka ee gargaari jiray Qaxootiga Soomaalida.